Heshiis hordhac ah oo laga gaaray hurgumadii Galgala iyo horu-u-socod kale oo loo ballansan yahay. – Radio Daljir
Heshiis hordhac ah oo laga gaaray hurgumadii Galgala iyo horu-u-socod kale oo loo ballansan yahay.
Luulyo 23, 2011 12:00 b 0
Galgal, July 22 – Wadahadallo u socday dawladda Puntland iyo kooxda uu hoggaamiyo Sh. Maxamed Siciid Atam kuna saabsanaa nabadda iyo is-fahamka ayaa la tilmaamayaa in lagu gaaray heshiis hordhac oo labada dhinac isla meel-dhigeen.
Wadahadallaadan oo si dadban maalmo badan ku socday ayaa markii u horraysay shalay si ka-fool-ka-fool ah isku soo hor-fariisteen xubnihii labada dhinac kala matalayey ee dawladda iyo buuralayda Galgala, shirkaasi oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Af-tuur oo ka tirsan gobolka Sanaag sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dawladda iyo odayaal dhaqameed deegaanka ah.
Shirka oo ay soo qaban-qaabiyeen dhallinyaro deegaanka ah oo kalsooni buuxda ka haystay labada dhinac, ayaa wararku waxay tilmaamayaan in si quddo-fog looga dooday nabad iyo degganaanshaha oo ahayd arrinta shirkuba ku salaysnaa kaddibna la isla meeldhigay saddex qodob oo asaasi u ah nabadda iyo is-faham dhammaystiran oo laga gaaro xaaladda Galgala.
Waxaana ka mid ah qodobbada la isla meeleeyey in ahmiyada la siiyo nabadda, lana saaro awoodda iyadoo laga ambaqaadayo duruufaha asaasiga ee dadka iyo deegaanka iyo in shir midkaan ka sal-ballaaran la iskugu yimaado muddo bil kaddib ah kaasoo dawladdu ay iclaaminayso goobta lagu qaban-doono.
Qodobka saddexaad ee la isla meel-dhigay ayaa ahaa in muddada bisha ah ee loo ballansan yahay shirka kale dhammaanba deegaanka buulayda ah laga saaro dadka aan deegaanka u dhalan ee gacan-siinayey kooxda Sh. Atam.
Shirkaan ayaa dhinaca Puntland waxaa uga qayb-galayey mas’uuliyiin sar sare oo ka socday wasaaradda amniga Puntland, madaxtooyada iyo saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland, hase ahaatee wali Radio Daljir uma cadda dhinaca Sh. Maxamed Siciid Atam iyo cidda u matalaysay shirkaasi, inkastoo wararka qaar tilmaamayaan in loo badinayo guurti-dhaqan oo dadka deegaankaasi Galgala ah in ay dhinacaasi u matalayeen.
Sidoo kale waxaan wali Radio Daljir u caddayn wadahadallada la-galay in ay ahaayeen mid beeleed, oo lala xaajoonayey beesha deegaankaasi degta iyo in ay dawladdu la heshiinayso urur ama koox, hase ahaatee waxaa la caddaynayaa dadka shirkaasi ka qayb-galiyey in uusan ku jirin Atam, basle waxaa la tilmaamayaa in uu ku qanacsan yahay cidda u matalaysay iyo nuxurka shirkaasiba.
Wararkaan oo ay Radio Daljir u xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Puntland iyo odayaal dhaqameed ka tirsan dadka deegaankaasi Galgal, ayaa intaasi ku daraya dhinacyadii ka qayb-galay shirkaasi si wanaagsan in ay u meeleeyeen dhammaan waxyaabihii la isla soo qaaday is-fahamkuna uu ahaa mid buuxa.
Qodobbada hordhaca ah ee lagu gaaray deegaanka Af-tuur, ayaa soo ifbaxay xilli toddobaadadii ugu dambeeyey ay jirtay hadal-hayn ku saabsan wadahallo qarsoodi ah u dhexeeyey dawladda iyo kooxda uu hoggaamiyo Maxamed Siciid Atam.
Xaaladda macaluusha oo ka sii daraysa iyo WFP oo ka hadashay caqabadda ay hor dhigtay Al-shabaab.
R/wasaare Gaas oo magacaabay 27 xubnood oo iskugu jira wasiirro-ku-xigeenno iyo wasiiru – dawlayaal.